Abaal Marinta Ganacsatada Somaliyeed Ee Sanad Laha Ah Ee [SABA] Oo Lagu Qabanayo Muqdisho
Burburkii ka dib markii ugu horeysay waxaa magaalada mugadishu ee caasimadda dalka lagu qabanayaa Abaal Marinta Ganacsatada Somaliyeed ee Sanad Laha Ah Ee [SABA] oo lagu abaalmarinaayo shirkadaha ganacsi ee dalka ka jira .
Barnaamijkaan ayaa waxaa qabanqaabiyay Majaladda Soomaaliya investor oo ah majaladda iyada maalgalineysa baranaamijkaan .
Madaxa Majaladda Soomaali Investor Maxamed Dhuubow oo ah ka mid ah qaban qaabayaashaa ayaa Goobjoog Business waxa uu uga warramay ujeedada barnaamijaakn iyo marxaladihii uu soomaray ganacsiga Soomaaliya waxa uuna yiri “sanadkaan waa sanad doorasho waxbadan oo wadanka lamaalgashan lahaa ayaa moodaa inay wadanka ka maqanyihiin sida shirkadihii ajaanibta”.
SABA waa hindise lagu abaal marinayo isla markaasna lagu farxad gelinayo Ganacsatada iyo Shirkadaha ku dhaqama hannaanka maamul wanaaga si loo dhiiro geliyo kobac dhaqaale ee ka dhasha Soomaaliya.
Kadib qiimeyn muddo socotay SABA waxa ay bixineysaa illaa 10 qeybood oo abaal-marinno ganacsi ah, kuwaas oo kala ah;
Shirkadda ugu hab maamulka wanaagsan ee sanadka [Company of the year]
Hoggaanka ama CEO ga ugu fiican sanadka [CEO of the year]
Shirkadda ugu wanaagsan ee loo shaqeeyo [Best Company to work for]
Shirkadda ugu wanaagsan suuq-geynta [Best marketer of the year]
Shirkadda ugu fiican tabarruca [CSR]
Bangiga ugu fiican sanadka [Best Bank of the Year]
Haweneyda Ganacsiga yar yar iyo midka dhexe [SME] ee sanadka
Dhalinyarada Ganacsiga yar yar iyo midka dhexe [SME] ee sanadka
Guud ahaan shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexe [SME] ee sanadka
Hay’adda dowladeed ee ugu dhiira-gelinta badan ganacsiga dalka
Dhanka kale waxaa bar bar socda shirweyne looga hadli doono arimaha dhismaha iyo guryeenta Soomaaliya oo ay iska kaashanayaan Majaladda Somali Investor iyo Idaacada ganacsiga ee Goobjoob Business barnaamijkaas oo 12 January, 2017 ka dhici doona Hotel Jazeera ee magaalada muqdisho .
Barnaamijkaan ayaa waxaa la filayaa inay ka soo qeyb galaan qeybaha kala duwan ee ganacstada iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda federalka Soomaaliya. waana markii ugu horeysay ee munaasabad noocan ah lagu qabto guud ahaanba dalka Soomaaliya